काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर देशमै केही काम गर्छु भन्ने योजना बनाउनुभएको छ ? उद्यमशील बन्न चाहनुहुन्छ ?
यदि तपाईँसँग योजना छ, तर रकम छैन भने सहुलियत ऋणको लागि निवेदन दिन अब ढिला नगर्नुहोस्। चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले विदेशबाट फर्किएका युवा लाई सहुलियत ऋणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। उद्यमशीलताका लागि ऋण लिन चाहने नगरवासीले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाखसम्म बिना धितो ऋण लिन सक्नेछन्।
नगरपालिका क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी कार्यक्रम, विदेशबाट फर्केका युवा लक्षित कार्यक्रम, महिला उद्यमशील कार्यक्रम र दलित समुदायको सीपमा आधारित व्यावसायिक कर्जा कार्यक्रमका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको हो।
उद्यमशील बन्न चाहने व्यक्ति तथा फर्मलाई नगरपालिकाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन आवेदन दिन आह्वान गरेको हो। सहुलियत ऋणका लागि नगरपालिकाले मागेको आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिन सकिने उपमेयर जानुका पराजुलीले बताइन्।
निवेदनको साथमा पेस गर्नुपर्छ यी कागजातः